Cradle View योगदानकर्ता बन्नुहोस् - Cradle View
क्र्याडल दृश्यको लागि एनिमे ब्लग लेखक बन्नुहोस्
क्र्याडल दृश्य योगदानकर्ता बन्नुहोस्
Cradle View एउटा द्रुत रूपमा विस्तार भइरहेको साइट हो र हामी सधैं हामीले सक्ने हरेक क्षेत्रमा बढ्न खोजिरहेका छौं। हामी सबै चीज एनिमको बारेमा हौं, र यदि एनिमे केहि चीज हो जसको बारेमा तपाईलाई धेरै थाहा छ वा रुचि छ भने, त्यसपछि क्र्याडल दृश्य ठाउँ हो। त्यो किनभने Cradle View वेबस्पेसमा मात्र विस्तार हुने छैन, तर सामाजिक सञ्जाल, समाचार, प्रिन्ट मिडिया, उत्पादन, वाणिज्य, र अन्य धेरै उत्पादनहरू र सेवाहरू जस्ता अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा पनि विस्तार गर्न गइरहेको छ।
हामी हाम्रा लेखहरू र ब्लग पोष्टहरूमा गर्व गर्छौं तर कहिलेकाहीं राख्नु त्यति सजिलो हुँदैन। विस्तृत र उच्च ROI लेखहरू र ब्लग पोष्टहरू लेख्नु एक भारी काम हुन सक्छ, विशेष गरी जब तपाईं अन्य क्षेत्रहरूमा शाखा बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यसैले हामी हाम्रो सामग्री प्रवाहित राख्न धेरै स्वतन्त्र र अनुबंध-आधारित लेखकहरूसँग काम गर्छौं।
त्यसोभए तपाईलाई कसरी थाहा छ कि यो स्थिति तपाईको लागि साँच्चै सही छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईको लागि यसमा के छ? Cradle View का लागि/साथ काम गर्ने बारे सबै मुख्य FAQ हरूको जवाफ यस पृष्ठमा दिइने छ।
Cradle View को लागी म कति लेख्न सक्छु?
हामी तपाईंलाई प्रति-लेख आधारमा मासिक भुक्तानी गर्छौं। यसको मतलब हामीले तपाईलाई लेख्ने प्रत्येक लेखको लागि भुक्तान गर्छौं, हामी तपाईलाई लेखमा कति शब्दहरू छन्, लेखको सामग्री, र यदि यो SEO अनुकूल छ वा छैन भन्ने आधारमा रकम तिर्नेछौं। हामी धेरै लेखहरु को लागी एक फ्लैट दर तिर्छौं तर हुदैन प्रत्येक महिना मानक भुक्तानी भन्दा बढी तिर्नुहोस्।
प्रत्येक लेख पोस्ट गर्न योग्य हुन 500 शब्दहरू भन्दा बढी हुनुपर्दछ र यदि लेख योग्य छ भने मात्र तपाइँलाई भुक्तान गर्न सकिन्छ। योग्य लेखहरू लेखमा भएका शब्दहरूको मात्राको आधारमा मात्र परिभाषित गरिन्छ। लेख योग्य छ वा छैन भन्ने निर्णय CV को एकमात्र विवेकमा आधारित छैन। हामीले पहिले भनेझैं यो लेखमा शब्दहरूको मात्रामा आधारित छ।
उदाहरण: यदि तपाइँ हाम्रो लागि7लेख लेख्नुहुन्छ र ती प्रत्येकको औसत मूल्य $ 5.00 छ, तब हामी तपाइँलाई त्यो महिनाको लागि $ 30.00 तिर्नेछौं तर यो भन्दा बढी छैन। $ 50 त्यो महिनाको लागि। यद्यपि, यदि तपाईंले लेख्नुभयो भने 28 लेखहरू सबै को औसत मूल्य संग $ 5.00, तपाईंले मात्र अधिकतम भुक्तानी प्राप्त गर्नुहुनेछ $ 50.00 28 x5125 भए तापनि - यो किनभने हामी भन्दा बढी भुक्तान गर्दैनौं $ 50 यदि तपाइँ परीक्षण अवधि भित्र पहिलो पटक लेखक हुनुहुन्छ भने प्रति महिना (3 महिना)। उही नियम लागू हुन्छ तर अधिकतम भुक्तान $ 80 मा बढाइन्छ यदि तपाईंले6महिनाको काम पूरा गर्नुभयो र $ 100 आधा वर्ष काम गरेपछि।
पहिलो को लागी3महिना (परीक्षण अवधि) बनाउन अपेक्षा $ 5.00 प्रति लेख, र भन्दा बढी छैन $ 50.00 जम्मा एक महिना।
पछि3महिना तपाईलाई भुक्तान गरिनेछ $ 10 प्रति लेख भन्दा बढी छैन $ 80.00 जम्मा एक महिना।
अन्तमा एक पटक तपाईंले पूरा गर्नुभयो6महिनाको कामको तलब दिइनेछ $ 20.00 प्रति लेख र भन्दा बढी छैन $ 100.00 जम्मा एक महिना।
मसँग एउटा वेबसाइट छ, Cradle View ले मलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छ?
हामी हाम्रो जस्तै अन्य साइटहरूसँग सहकार्यमा गर्व गर्छौं! त्यसोभए यदि तपाइँसँग एनिमको दायरामा सामग्री प्रकाशित गर्ने एनिम सम्बन्धित साइट छ भने, कृपया हाम्रो साइटमा योगदान गर्न साइन अप गर्ने विचार गर्नुहोस्। Cradle View सँग लगातार बढ्दो DA छ, र हामी लेखकहरू र साइट मालिकहरूलाई हाम्रो लागि लेखहरू लेख्ने मौका दिन्छौं र हाम्रो साइटमा मूल लेख जोडिएको छ। हामी तपाईको साइटमा तपाईले जति पटक चाहानुहुन्छ लिंक गर्नेछौं र तपाईले क्र्याडल भ्यू साइटलाई चिच्याउन र तपाईको आफ्नै साइटको अनुसरण र ब्रान्ड जागरूकता बढाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको साइटको लागि डोमेन प्राधिकरण निर्माण गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ र नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको अधिग्रहणमा निर्णायक छ। क्र्याडल दृश्यले तपाईंलाई एनिमे निचमा पहिले नै स्थापित भएको साइटमा लिंक गर्ने मौका दिनेछ। लिङ्कहरूले संलग्न दुवै साइटहरूलाई बलियो बनाउँदछ र यो एक सार्थक प्रक्रिया हो एक पटक बीउ राखिएको र सामग्री उत्पादन गरेपछि। त्यसोभए यदि तपाइँ तपाइँको सामग्री तपाइँको साइटमा फिर्ता लिङ्क गरिएको मौकाको लागि Cradle View को लागी लेख्न चाहानुहुन्छ भने फारम प्रयोग गरेर हामीलाई सन्देश पठाउनुहोस् र हामी सकेसम्म चाँडो तपाइँलाई फिर्ता गर्नेछौं।
म एक साइट प्रशासक बन्न चाहन्छु, यो सम्भव छ?
हामी Cradle View चलाउन मद्दत गर्न प्रशासकहरू खोजिरहेका छौं, यी कार्यहरू पूरा गर्नु र तिनीहरूलाई सम्बोधन गरिएको सुनिश्चित गर्नु साइटको सञ्चालनको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो र पक्कै पनि धेरै जिम्मेवारी बोक्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। त्यस कारणको लागि, हामी साधारण आधारमा कसैलाई काममा राख्दैनौं र आफ्नो र तपाईंको आफ्नै अनुभव र व्यक्तिगत चासोको बारेमा थप गहिरो जानकारी चाहिन्छ। कृपया हामीलाई इमेल मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस् यदि यो केहि चीज हो जुन तपाईलाई धेरै रुचि छ।
म पक्का छैन कि मेरो सामग्रीले सम्पादन जाँच पास गर्नेछ
चिन्ता नगर्नुहोस्! यो सबै समय हुन्छ। वाशिंगटन पोस्ट र न्यूयोर्क टाइम्सका लागि धेरै लेखकहरू र रिपोर्टरहरू समस्याको साथ प्रस्तुत गरिएका छन् कि उनीहरूले लेखेका सबै कुरा आक्रामक रूपमा जाँच र सम्पादन हुन्छन्। यद्यपि, Cradle View मा यो मामला होइन। हामी तपाईंको काममा हावी हुन स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र विचारको लागि अनुमति दिन्छौं। त्यहाँ केहि दिशानिर्देशहरू छन् जुन तपाईंले काम लेख्दा र लाइट जाँच गर्दा पालना गर्नुपर्नेछ, तपाईंको काम लगभग तुरुन्तै पेश गरिनेछ, तपाईंले यसलाई पोस्ट गर्ने तरिकामा निर्भर गर्दछ। (सम्भव हुँदा हामी पोष्टहरू र लेखहरू अनुसूचित गर्न रुचाउँछौं)।
तल साइन अप गर्नुहोस्
तपाई हामीसँग काम गर्न पाउनु सम्मानको कुरा हुनेछ। हामी एक बढ्दो प्लेटफर्म हौं र हाम्रो उपस्थिति यहाँ रहन को लागी छ। यदि तपाईं हामीसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ विभिन्न तरिकाहरू छन्। हामी सँधै अन्य साइटहरूसँग काम गर्न र नजिकका क्षेत्रहरूमा शाखाहरू गर्न तयार छौं। छनोट अब तपाईको हो, तल सम्पर्क गर्नुहोस्।
तल एक साधारण फारम हो जुन तपाईंले साइन अप गर्न र स्थितिको लागि आवेदन दिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
अनुरोध पेश गर्नुहोस्